Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး58 SivasSivas Demirspor ကလပ်ရာသီသစ်ဖွင့်လှစ်
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 58 Sivas, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, တူရကီ 0
sivas demirspor ကလပ်အသစ်ရာသီ acti
Sivas Demirspor ကလပ် 2019-2020 ရာသီဖွင့်လှစ် Sivas Demirspor ကလပ်ရာသီဖွင့်လှစ်မှုအစီအစဉ်Tüdemsaşအထွေထွေမန်နေဂျာနှင့် Sivas Demirspor ကလပ်ဥက္ကChairman္ဌ Mehmet Basoglu၊ ရထားလမ်း - စီးပွားရေးပြည်ထောင်စု Sivas ဘဏ်ခွဲဘဏ္Financialာရေးအတွင်းရေးမှူး Kemal Expert၊ Sivas Demirspor ကလပ်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ Sivas Demirspor ကလပ်၏ဌာနခွဲအသီးသီးတွင်လုပ်ကိုင်နေသောနည်းပြများနှင့်အားကစားသမားများတက်ရောက်ကြသည်။
ရာသီသစ်ဖွင့်ပွဲမတိုင်မီသားကောင်များကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သောTüdemsaşအထွေထွေမန်နေဂျာနှင့် Sivas Demirspor ကလပ်ဥက္ကChairman္ဌ Mehmet Başoğluကပြောကြားသည်မှာ Sivas Demirspor Club အသင်းအားလူထုအားလေးစားစွာနှင့်မေတ္တာဖြင့်နှုတ်ဆက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလပ်သည် Sivas ရှိဌာနခွဲများစွာတွင်အားကစားစက်ခေါင်းဖြစ်သည်။ 1940၊ အခြေခံအားဖြင့်တူရကီအားကစားအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်အားကစားသမားများအနေဖြင့်၎င်း၏လူကြီးလူကောင်းရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။ ရာသီသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အကျိုးရှိရှိနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလို။ သင်ဆက်လက်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်ဆန္ဒရှိသည်။
ရထားလမ်း - စီးပွားရေးပြည်ထောင်စု Sivas ဘဏ်ခွဲဘဏ္Financialာရေးအတွင်းရေးမှူး Kemal ၏ရာသီသစ်တွင်တူရကီအားကစားနှင့် Sivas Demirspor ကလပ်အသိုက်အ ၀ န်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။
Sivas Demirspor ကလပ် xnumx'inc ၏တစ်နှစ်တာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ် 25 / 12 / 2015 Sivas Demirspor ကလပ်က၎င်း၏ xnumx'inc တစ်နှစ်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်: အ 75 ခုနှစ်တွင် Sivas 1939 အတွက် Demirspor ကလပ်အချိန်ဆုံးရှုံးမပါဘဲနာမကိုအမှီTÜDEMSAŞနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ထူထောင်ခြင်း '' အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ Sivas ကိုခပ် '' ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာရပ်ရွာ၏လမ်းများယူလူငယ်များပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထောကျပံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အကိုင်းအခက်များတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားဘောလုံး, ဘတ်စကက်ဘော, ဘော်လီဘော, နပန်း, ပြေးခုံပစ်, လက်ဝှေ့, တိုက်ကွမ်ဒိုအားကစားသမားများတွင် Demirspor ကလပ် site ကို။ Sivas, အနပန်းဧရိယာပေါ်တွင်နိုင်ငံတကာအောင်မြင်မှုများအတွက်အားကစားကျောင်းက၏ status အတူကလပ်ရယူသည်။ Sivas Demirsporl သူတို့တစ်တွေလူငယ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲကနေဆုတံဆိပ်နှင့်အတူပြန်သွားပါ။ ကြောင်းဂျာစီကိုဝတ်ဆင်သူအများအပြားအားကစားသမားများလေ့ကျင့်သောအခြားကလပ်အသင်းမှဘောလုံးခုနှစ်တွင်အဖြစ် Demirspor'da Sivasspor'a: အဖျတ်လတ်သွက်လက်စေ ...
Sivas Demirspor ကလပ်: အဆိုပါအလံ, အဆိုပါအမိမြေကျွန်တော်တို့ကို 21 / 07 / 2016 Sivas Demirspor ကလပ်နွေရာသီအားကစားသင်တန်းကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်အရပ်အရေးပါသောဖြစ်စဉ်များနိုင်ငံအတွင်းငယ်ရွယ်အားကစားသမားများအတွက်, အလံနှင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်အကုန်ကျရှိသည်ထင်ရှား။ , တူရကီအလံမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အနာဂတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေ့ကျင့်ရေးမှလုပ်ပြစ်မှားသောအာဏာသိမ်းမှုကြိုးပမ်းမှုတုံ့ပြန်သရုပ်ပြသူငယ်ရွယ်အားကစားသမားများနှင့်အတူထွက်လာ၏။ Sivas Demirspor ကလပ်သင်တန်းလယ်ပြင်၌သင်တန်းကျောင်းသားများသည်နွေရာသီအားကစားနည်းပြ Mehmet Yadigar ကို double-ရည်မှန်းချက်ပွဲစဉ်အားဖြင့်ထက်ဝက်သူတို့ရဲ့ခိုင်မာစီမံခန့်ခွဲမှုပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။
Sivas Demirspor ကလပ်သာမန်အထွေထွေမိတ်ဆက်ဘုတ်အဖွဲ့ 19 / 06 / 2019 မီးရထား - အထွေထွေတစ်ခုတည်းစာရင်းသို့ ဝင်. အခန်းပေါင်းတွေ့ဆုံတှငျကငျြးပခဲ့ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂများတည်ထောင်ရန်သူ Work ။ ရွေးချယ်ရေးရဲ့အဆုံးမှာTÜDEMSAŞမှ General Manager Mehmet Başoğlu Sivas Demirspor ကလပ်၏သစ်ကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Demirspor, ကွန်ကရစ် Transvestite စက်ရုံ Manager ကိုအလီ Karabey, TCDD4လူငယ်၏ Sivas မီးရထား-စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြည်ထောင်စုအစည်းအဝေးခန်းမသာမန်အထွေထွေညီလာခံနှင့်အားကစားန်ဆောင်မှုများပြည်နယ်ဒါရိုက်တာအာဒိုဂန်ကြေးအတွက်ကျင်းပခဲ့တယ်။ လက်ထောက်ခရိုင် Cemalettin ဂိဒေါင်သည်အလုပ်သမားများပြည်ထောင်စုဌာနခွဲကသမ္မတ Murat ဘောလုံးပြိုင်ပွဲပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ် Hayrettin Yildiz, Sivas သုတ်သင် railways, အပျော်တမ်းအားကစားဒုတ်နှင့် Demirspor ကလပ်အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကအပေါ်အထွေထွေညီလာခံ Hayrettin Stars ဘောလုံးစီးတီးကိုယ်စားလှယ်ဖန်တီးတပ်ဆင်ခနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ...
ကျင်းပ Sivas Demirspor ကလပ်ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး 06 / 07 / 2019 TÜDEMSAŞပြီးနောက် Sivas Demirspor ကလပ်စီမံခန့်ခွဲမှုသာမန်အထွေထွေညီလာခံ Nuri Demirağလူမှုရေးအဆောက်အဦးများအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကလပ်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်Başoğluတှငျကငျြးပခဲ့မှ General Manager Mehmet TÜDEMSAŞပထမဦးဆုံးဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတာဝန်များကိုများ၏အသားအရောင်ခွဲခြားကျင်းပခဲ့သည်သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်။ အသစ်ကခေတ်စီမံကိန်းများတွင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီးစားပွဲ၏ကလပ်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဖွဲ့စည်းပုံမှာမှဝန်ခံခဲ့သည်ခဲ့သော Sivas Demirspor ကလပ်ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင်အဆိုပါကလပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒေသများ၏အဆုံးမှာ။ အနီးကပ်လိုင်စင်အားကစားသမား 800 ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လည်ပတ်ကလပ်နှင့်အတူ 5, ဥပစာအပေါ်အားကစားလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းသေချာအတွက် Sivas Demirspor သဘောတူညီမှုကိုနားလည်၏အလွန်yetiştirmecကနေပြိုင်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ပစ်မှတ်ကလေးများနှင့်လူငယ်အားကစားရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများကြောင့်ဖြန့်ဖြူး ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: အောက်တိုဘာလ 29 1932 Demirspor ကလပ် Kayseri ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ 29 / 10 / 2012 အောက်တိုဘာလ 29 1919 မဟာမိတ်များတရားဝင်စစ်တပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြှင့်ကိုပြု၏။ ယနေ့အထိဧပြီလကနေ -15 ဇန်နဝါရီလ 15 1920 50 ရာခိုင်နှုန်း, ဧပြီလနှင့်ဧပြီလ 16 30 နေ့စွဲအကြား 1920 400 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပြီးနောက် အကယ်. ဤရက်စွဲလည်းအစီရင်ခံထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။ အောက်တိုဘာလ 29 1932 Demirspor ကလပ် Kayseri ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ 29 1933 Sivas-Erzurum 10 သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ပိုက်လိုင်းဆောက်လုပ်ရေး။ ဒါဟာနှစ်ပတ်လည်နေ့အပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ 10 သမ္မတနိုင်ငံမီးရထားဂျာနယ်။ တစ်နှစ်တာကသူ၏ပုဂ္ဂလိကအရေအတွက်ကချွတ်ယူကြ၏။ အောက်တိုဘာလ 29 1944 Fevzipaşa-Malatya-Diyarbakir-Kurtalan ရထားလမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Sivas Demirspor ကလပ် xnumx'inc ၏တစ်နှစ်တာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်
Sivas Demirspor ကလပ်: အဆိုပါအလံ, အဆိုပါအမိမြေကျွန်တော်တို့ကို
Sivas Demirspor ကလပ်သာမန်အထွေထွေမိတ်ဆက်ဘုတ်အဖွဲ့
ကျင်းပ Sivas Demirspor ကလပ်ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ 29 1932 Demirspor ကလပ် Kayseri ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်
တူရကီ Demirspor ကလပ်မှ General Manager İsa Apaydın"S လည်ပတ်သူများ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဇွန်လ 15 1931 Izmir Demirspor ကလပ်
အခွက်တဆယ် Sivas Demirspor ချီးမြှင့်ခဲ့သည်